रु रु जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओमा आजसम्म मागभन्दा करीब ५० गुणा बढी आवेदन
चैत २३, काठमाडौं । शुक्रवारदेखि सार्वजनिक निष्कासनमा आएको रु रु जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन रहेको छ ।
चौथो दिन सोमवार साँझ ५ बजेसम्म मागभन्दा ४९ दशमलव ४९ गुणा अर्थात् करीब ५० गुणा बढी आवेदन परिसकेकाले कम्पनीले छिटो अवधि सोमवारभित्रै आईपीओ विक्री बन्द गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले छिटो अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेको खण्डमा ढिलोमा वैशाख ३ गतेसम्म आईपीओ विक्री गर्ने मिति तय गरेको थियो । सिडिएस एण्ड क्यिरिङ लिमिटेडको अनुसार सोमवार साँझसम्म यस आईपीओमा १३ लाख ८ हजार ९८५ जनाले १ करोड ८७ लाख ६५ हजार ६०० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
कम्पनीले अंकित मूल्य रू. १०० मा रू. २० प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता रू. १२० मा सर्वसाधारणलाई आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो । यो शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
हाल रू. ३२ करोड ६१ लाख ६४ हजार ४०० चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको आईपीओ पश्चात चुक्तापूँजी रू.४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० पुग्नेछ । उक्त कम्पनीले गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ५ मेगावाट क्षमताको रु रु जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरी २०७१ साल चैत ९ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको छ ।
उक्त आयोजनाबाट प्रतिदिन ४ दशमलव ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म यस आयोजनाले रू. ५ करोड १२ लाख ४८ हजार बराबरको विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई विक्री गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा रू. ४ लाख ६६ हजार बढी रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रू. ६ करोड १४ लाख ४७ हजार खुद नाफा गरेको यस कम्पनीको उक्त अवधिसम्म प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव ८४ रहेको छ । दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्य तोकिने व्यवस्था अनुसार कम्पनीले रू. ११८ दशमलव ८४ देखि रू. ३५६ दशमलव ५२ सम्मको मूल्य रेञ्ज पाउने देखिन्छ ।